Masaajid ay ku tukadaan hal qabiil oo Soomaali ah heebsooc awgiis - BBC News Somali
Masaajid ay ku tukadaan hal qabiil oo Soomaali ah heebsooc awgiis
Waxaa wali qaybo badan oo ka mid ah gayiga Soomaalida ay degto ka jira heeb-sooc ama takoor lagu sameeyo qaar ka mid ah bulshada.
Heeb-soocan ayaa mara maraxalado kala duwan oo bulshada lagu takoora ay sheegeen in dhibaato maskaxeed ay u gaysato iyo waliba dhibaatooyin kale oo xag dhaqaale iyo xag nololeedba leh.
Magaalada Qabridahar ee dawlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya waxaa ku yaalla masaajid ay ku tukadaan dadka la heeb-sooco oo aysan bulshada kale kula tukan.
Maalim Cabdulaahi Cabdi Xassan waa Imaamka masaajidkan wuxuuna BBC-da u sheegay inay jiraan dad garab mara masaajidka iyada oo uu aqinkii hataa dhacay.
" Waxaan u sheegay inuu masaajidka Ilaahay leeyahay aysan lahayn cid gaar ah ee ku soo tukada, balse ma jiraan wax ka suura galay weli." Ayuu sii raaciyey imaamka.
"Waxaan indhahayga ku arkay dad badan oo inta ay salaadda Maghribka ku soo gashay intay masaajidka galaan kuna waysaystaan haddana ka dhaqaaqan oo masaajidda kale ay salaadda u aadan." Ayuu yiri Muxidiin.
Sawirrada dadki New Zealand lagu laayey iyaga oo msaajid ku dukanaya
"Waxaan aaminsanahay in sababta ay dadkaan masaajidka u garab marayayaan ay tahay in ay isleeyihiin masaajidka waxaa iska leh ciddaas Gabooyada ah, massjidka Ilaahay ayaa leh mana lahan qabiil gaar ah." Ayuu yiri Imaam Maalim
"Sababta waxay ila tahay inay dadkaan isleeyihiin maadama uu masaajidkan dad Gabooya ah ay gacanta ku hayaan wax lagaaga aqbalaayo malahan." Ayuu yiri Muxidiin Shafeec.
"Wixii iigu caajibka badnaa ayaa ah, masaajid burbursan ayaa waxa aan damacnay inaan hagaajinno waana dayactirnay waxaan ogaannay in masaajidka ay kaliye ku tukadaan dad qaas ah oo aysan dadka kale gelin masaajidkan. Dadka masaajidkan leh ee ku tukado ayaa ah dadka Gabooyada kuwa aanan ku tukanin ayaa ah kuwa isku haysto inay dadkan iyaga ka sareeyaan." Ayey tiri Sahra.
"Waxaan marar badan ku ololaynay in diintu tahay mid kaliye oo ay labada qof ee Muslimka ah ay walaalo yihiin, oo ay culimada iyo wax garadka bulshada ay ka hadlaan." Ayey sii raacisay hadalkeeda,.
Waa fikir qaldan oo aan loo baahnayn waa in ay Ilaahay dadkan cafis weydiistaan, Shareecada Islaamka ayey taasi baalmaraysaa, qof Gabooy ah oo sharciga iyo diinta yaqaana ayaa waxa uu ka fadli badanyahay kuwa aan diinta lahayn ee xad gudubka wado, waxaan ku tala jirnaa inaan dadka arrinkan ka wacyigelnino." Ayuu yiri Sheikh Ibraahim waxa uu ka mid yahay culimada ku nool magaalada Qabridahar.